एकै सास मा मन भरी हुँ डलिएका तिक्तता लाई ओकलिदिनु भो ।
हाम्रो मुलुकको यो तिक्तताले हामी नागरिक को मन असाध्यै तितो भएको छ ।
प्रबिण जि ! तपाईंले त लेखेर पनि मन हल्का गर्नु भो ( एक छि न् किन नहोस् ) , लेख्दै जानु होस् ! हाम्रा आबाज हरुले ति तिक्त बिख लाई जटामसी को काम पो गर्छ कि !
भन्छन नि सास भए सम्म आस रे ! आश नमार्नुस् है ।